The 5 kasị mma ọgụ egwuregwu maka gam akporo | Androidsis
Egwuregwu ọgụ 5 kacha mma maka gam akporo
Aaron Rivas | 30/11/2021 08:13 | Egwuregwu gam akporo, Mobiles
Ịgba mgba bụ otu n'ime ọzụzụ na egwuregwu ndị nwere mmasị kachasị n'ụwa, n'agbanyeghị na ha nwere alaka dị iche iche, n'ime ha bụ mgba na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ na-agụnye ịgba egwu na ịkụ ọkpọ. Na, n'ihi na ọ na-ewu ewu na otú ọ na-ere ahịa na ọkwa ahịa na mgbasa ozi, o nwere ọtụtụ ihe nkiri, egwuregwu na ọbụna uwe na uwe na-ere nke ọma n'ụwa nile. Ọ bụ ya mere e nwekwara ọtụtụ egwuregwu ọgụ na Android Play Store, na ebe a anyị na-ekwu banyere ihe kasị mma.
Anyị na-ewetara gị ndepụta nke Egwuregwu ọgụ 5 kacha mma maka gam akporo. Ọ dị mma ịmara na ha niile bụ ndị nweere onwe ha ma so na ndị kachasị ewu ewu, ebudatara ma kpọọ n'ụdị ha.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ a ọnụ ọgụgụ nke kasị mma ọgụ egwuregwu maka gam akporo smartphones. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
1 UFB 2: Ndị na-egwu egwuregwu 2 na-alụ ọgụ
2 Super ọgụ - Boxing Simulator na Enyi
3 Rowdy mgba
4 M, Onye - Egwuregwu ọgụ
5 Skullgirls: Na-alụ ọgụ RPG
UFB 2: Ndị na-egwu egwuregwu 2 na-alụ ọgụ
Anyị na-amalite na UFB 2: Ndị na-egwu egwuregwu 2 na-alụ ọgụ, otu n'ime egwuregwu ọgụ kachasị ewu ewu maka gam akporo. Aha a enweelarị ihe karịrị nde 5 nbudata yana ọkwa ụlọ ahịa kpakpando 4.4 a na-akwanyere ùgwù.
Edemede eserese eserese o nwere bụ ụfọdụ kacha atọ ọchị. Chee echiche, n'otu oge ahụ ha dị ọkụ ma dị njikere ma na-achọsi ike ịlụso ibe ha ọgụ iji gosi nke ka mma.
Ma ọ nwere a multiplayer mode nke ị nwere ike họrọ gị agwa ka ihu ya na ndị ọzọ ezigbo egwuregwu ndị nọ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Enwekwara ọnọdụ ọrụ nke ị nwere ike iji nke nta nke nta na ị ga-emeri ndị niile na-agba ọsọ na-abịa n'ụzọ gị; Enwere ọnọdụ atọ: UFB Arena, ọhịa, glacier na ọdụ ọkụ. Kedu ihe ọzọ, njikwa ya na usoro egwuregwu ya dị mfe, mana ọ na-eri ahụ ma na-atọ ụtọ nke ukwuu. Enwere ihe ịma aka 50 na-agbaji ọkpụkpụ ị ga-emerịrị n'otu n'otu, ka ị bụrụ onye agha kachasị egwu na nke a na-apụghị imeri emeri na akụkọ ihe mere eme.
Ụdị ọgụ a kapịrị ọnụ nke ị ga-ahụ na UFB 2: Ndị na-egwu egwuregwu 2 bụ Mixed Martial Arts (MMA).
UFB 2 na-alụ ọgụ: egwuregwu ọgụ
Developer: Egwuregwu Tapps
Super ọgụ - Boxing Simulator na Enyi
Nke a bụ otu n'ime egwuregwu ọgụ kachasị ama ama n'ebe ahụ, ọ bụghịkwa n'ihi ya, mana n'ihi agwa ndị o nwere, nke so na Nickelodeon kachasị ewu ewu na nke na-amasị ya. N'ebe a, ị nwere ike igwu egwu na Roberto Estropajo (SpongeBob), Ninja Turtles, Dany Fenton (Phantom), Invader Zim, Kid Danger, The Rugrats, Timmy Turner na ndị ọzọ.
Na ajụjụ, Ọ bụ egwuregwu ime egwuregwu arcade RPG. Soro ndị otu gị soro asọmpi ọgụ wee gosi ndị enyi gị kacha mma na aha ịme ọkpọ a. Mee combos pụrụ iche nke gụnyere ịgba, ịkụ ọkpọ na igbu egbu, mana buru ụzọ kọwaa atụmatụ ọgụ gị, n'ihi na ndị mmegide siri ike ma mara ihe. Banye n'ọgbọ agha n'atụghị egwu wee gosi etu ị siri sie ike na enweghị mmeri n'ọgbọ egwuregwu!
N'ịga n'ihu na egwuregwu nke atọ na ndepụta a nke egwuregwu ọgụ kacha mma maka gam akporo, anyị na-agafe
Rowdy mgba, aha na-atọ ụtọ nke ahọrọla ịnye eserese na ihe nkiri ochie, yabụ njirimara ya bụ ịga njem na-enweghị atụ na egwuregwu ndị ahụ sitere na 90s nke a hụrụ n'anya dị ka ụmụaka. N'ezie, ebe a na-arụ ọrụ ike na egwuregwu na-arụ ọrụ ndị ọzọ agile na-atọ ụtọ, ya mere ọ bụ egwuregwu kwesịrị ịgbalị, n'enweghị obi abụọ ọ bụla.
N'ime egwuregwu a, ị nwere ike ịnwa ịme njikọ dị iche iche nke mmegharị na ọgụ, dị ka dropkicks na ụdị ọkpọ nkụ dị iche iche. Bụrụ onye ọgụ ikpeazụ guzo na ọnọdụ Rumble wee lụọ ọgụ maka aha na ọnọdụ ọrụ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, kpọọ na Tag Team mode. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhọrọ site na 55 pụrụ iche na àgwà ọjọọ ụmụ nwoke; họrọ nke kacha mma maka mmasị gị ma mee ka ọ bụrụ onye agha kachasị ike.
M, Onye - Egwuregwu ọgụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ mmadụ ọkpọ, egwuregwu a zuru oke maka ya. Eserese 3D ya ga-eme ka ị na-ahụ anya dị ka ọ dịtụbeghị mbụ n'ọnọdụ ebe, ọ bụrụ na ị naghị alụ ọgụ, ị ga-efunahụ ya, mana ọ bụghị naanị ọgụ, kamakwa nkwanye ùgwù nke ndị na-emegide gị.
Kpọọ ẹnya-uzu-ọkpa; ebe a ka ihe na-agba ara. Ị ga-emeso ọtụtụ ndị n'otu oge ma ị nweghị ike ịsị mba, n'ihi na ị ga-anọ na mbara ala; Ọ bụ ọgụ ma ọ bụ ọgụ, ọ nweghị ụzọ ọzọ ọ dị. Ị nwere ike ịnwale usoro ọgụ dị iche iche, dị ka ịkụ ọkpọ. Tụfuo ịgba egwu, na-eme karate na ọkpọ ọkpọ ndị ọzọ. Ebumnuche gị bụ ịchụpụ ndị iro n'ọgbọ agha wee bụrụ onye mmeri kacha.
N'aka nke ya, enwere ọtụtụ mgbanaka ọkpọ na ọgụ ịhọrọ, ebe ị nwekwara ike ịhazi nwa bebi gị ma kwalite ha ruo n'ókè nke na ha enweghị ike imeri na enweghị ike ịkwụsị. Ihe ọzọ bụ na ị nwere ike ihu ndị ọzọ egwuregwu si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa ekele ya multiplayer mode.
Skullgirls: Na-alụ ọgụ RPG
Iji mechaa nke a mkpokọta post nke 5 kasị mma ọgụ egwuregwu maka gam akporo, anyị nwere Skullgirls: Na-alụ ọgụ RPG, aha ọzọ na-ewu ewu nke na-anya ihe karịrị nde 5 nbudata na Play Store ma nwee aha ọma 4.6-kpakpando.
Ọ bụ ezie na ọ bụ egwuregwu ikpeazụ na ndepụta a, ọ bụ n'ezie otu n'ime ihe kachasị mma, ma n'ihe gbasara eserese na egwuregwu. O doro anya na ọ bụ aha kwesịrị ịnwale.
Developer: Egwuregwu n'oge mgbụsị akwụkwọ, LLC
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu ọgụ 5 kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu 5 kacha mma maka gam akporo
Ewepụtara ZMI PowerPack No. 20 - Batrị mpụga kọmpat na-agbanwe agbanwe nke na-ana MacBook Pro inch 16